K25 Ambohimahitsy sy Avaradrano Mandeha ny “porte à porte” hampandaniana an’i Dada
Efa mandroso sy mivelatra tsara ny fomba fiasan'ny K25, ary efa mandeha ny fanentanana toy ny an'ny Kaominina Ambohimangakely, ka anisan’ireny ny fokontanin'Ambohimahitsy.
Ny "Porte à porte" no paikady hampiasainay ka misy ny fanentanana miampy ny fizarana ny “Manifesto” sy fametahana ireny peta-drindrina ireny, hoy Rakotoarijaona Jean Claude anisan’ireo manampy amin’ny fanentanana. Manentana ny rehetra mba samy handray anjara izy ireo ary aoka tsy hisy fanilikilihana ny namana izay maniry hiaraka amintsika sary ady sy tolona no hatrehantsika. Mila ezaka sy asa ny fandresentsika. Nahazo 51% tamin'ny faritra Avaradrano fifidianana fa tanjona ny 70% hatrany amin'ny 75% farafahakeliny amin'ny fihodinana faharoa, hoy Ratovondrahona Solofoniaina na “Riri”. Manentana ny olona ho tonga hifidy satria maro ihany ny nieritreritra hoe handeha ho azy, saingy efa miara-mahita ny rehetra izao fa zava-dehibe ny fiaraha-mientana. Ny DIS TIM Avaradrano dia manentana ny rehetra handrotsaka ny laharana 25 fa eo isika no horaisina raha diso safidy eo. Manentana ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka mba handrotsa-bato ho an’i Marc Ravalomanana amin’ny 19 desambra, ary hanara-maso ny safidy natao. Izy no farafanantenana ho antsika, ary vao diso safidy eo dia hanenina tokoa ary hisy fiantraikany hatrany amin’ny taranaka faramandimby, hoy Ratovondrahona Solofoniaina na “Riri”, anisan’ireo mpitarika ny TIM Avaradrano.